watchOS 5.1.2 inowedzera kuwanikwa muWalkie-Talkie yekudzora nzvimbo | Ndinobva mac
watchOS 5.1.2 inowedzera kuwanikwa muWatchie-Talkie inodzora nzvimbo
Pamusoro penyaya dzese dzine chekuita nekugadzikana, kuvimbika nekumwe kugadzirisa kwakaitwa mune beta vhezheni yeWOSOS 5.1.2, vanogonesa vane mvumo vawana imwe shanduko inonakidza muapp Walkie-Talkie.
Mune ino kesi, sekutaura kwemusoro wenhau, iri pamusoro pekugona kuita kuti iro nyowani Walkie-Talkie basa riwanikwe zvishoma uye ndosaka richizove ikozvino inowanikwa munzvimbo yekudzora yewadhi yedu. Ichi chitsva chichava chakanakira avo vese vanochishandisa sezvo icho chinotibvumidza kumisikidza kana kudzima sarudzo yacho nekukurumidza uye zvirinani.
Imwe yekudhindisa kuti iite kana kuimisa kubva kunzvimbo yekudzora
Nekuuya kweiyi "yakanangana nekuwana", vashandisi vava kuzokwanisa kudzora chishandiso zviri nani uye ndipo patinove nacho chinoshanda chero nguva ziviso inogona kusvika uye izvi zvinogona kuve dambudziko mune dzimwe nguva, saka vanhu vazhinji haishandise nekuda kweiyo «yakaoma» kuwana yekumisikidza kana kuimisa nenzira yakakodzera uye nekukurumidza. Iye zvino neiyi sarudzo nyowani muwatchOS 5.1.2 tichava nekukurumidza kuwana uye nekudaro zvinotarisirwa kuti ichashandiswa zvishoma.
Kana icon iri neruvara rweyero Zvichava kana isu tave mune inowanikwa mode takagadzirira kutumira kana kugamuchira mameseji panguva ino, nekudzvanya pane izvi ruvara ruchachinja kuita grey uye zvinoreva kuti sevhisi yakadzika. Zvino neshanduko iyi hazvichadiwe kuenda kumasetingi ewachi, ingobaya pane bhatani kuti uchinje kuwanikwa kwedu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » watchOS 5.1.2 inowedzera kuwanikwa muWatchie-Talkie inodzora nzvimbo
Iyo nyowani 1001 Yekupedzisira Mahjong 2 yeMac inosvika
Iyo 2018 Mac mini ine dzimwe nzira dzekugadzirisa kupfuura iyo 2014 modhi